Ajụjụ - Suzhou Funncycle Intelligent Technology Co., Ltd.
Ọnụahịa anyị ga-agbanwe dabere na nhazi nke ebikes na ihe ndị ọzọ dị n'ahịa. Anyị ga-ezitere gị ndepụta emelitere ọnụahịa mgbe ụlọ ọrụ gị kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe.
Ee, anyị chọrọ iwu mba ụwa niile ka ịnwe nke kacha nta na-aga n’ihu. Nabata ịbụ onye na-ere ahịa ma ọ bụ onye nnọchi anya anyị.
Maka ihe atụ, oge ndu bụ ihe dịka ụbọchị 15. Maka imepụta oke, oge ndu bụ 30-60 ụbọchị mgbe ọ natara ego nkwụnye ego. Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere ihu ọma ikpeazụ maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na oge ị ga - emechi, biko gafee ire gị maka ire ere gị. N'ọnọdụ niile, anyị ga-anwa igbo mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ike ime ya.